"Na dia tsy nifanaraka tamin’ny eritreritsika ka nandiso fanantenana ny valim-pifidianana dia nandresy isika eo imason’i Afrika sy izao tontolo izao tamin’ny fandeferana sy filaminana nasehontsika", hoy ity filoha teo aloha ity nanoloana ny TIM-K25 tonga maro avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, nameno trano lehibe.
Tsy toetrako amin’ny maha olombelona nofo sy rà ahy ny toy izao ary mametram-panontaniana ihany aho hoe : mandrampahoviana no fetran’izao fandeferana izao, hoy i Marc Ravalomanana nefa manaiky isika fa izao no lalana itondran’Andriamanitra antsika.
« Mahereza ! » io no teny naverimberiny sy nampaherezany ary koa nampiomanany sahady ireo mpiara-dia aminy. Nambarany fa dia ny « plateforme » TIM-K25, izay efa fiantombohan’ny fampihavanam-pirenena no hiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ho avy, ka anentanany ny olom-pirenena hisoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana.
Notsiahivin’i Marc Ravalomanana fa toerana miisa 310 no notsidihiny tamin’ny helikôtera nandritra iny fifidianana iny, ankoatra ireo naleha tamin’ny fiara, nahitany maso sy nahatsapany ny fahasahiranan’ny Malagasy. Nambarany fa vonona hitondra ny anjara birikiny sy ny fahaizamanaony amin’ny fampandrosoana ny Malagasy sy Madagasikara ny tenany sy ireo mpiara-dia aminy.
Namerina ny antso amin’ny fitondrana vaovao mijoro ny tenany, hampitsahatra ny fisamborana sy fanagadrana noho ny hevitra politika tsy mitovy, hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena.